Shiinaha dharka ilaalin kara ee la tuuro, Soo-saar aan nadiif aheyn iyo Warshad | Jingzhao
Model: hal gabal oo aan lahayn dabool kabo
Faahfaahinta: s, m, l, XL, XXL, XXXL
Waxaa u adeegsada shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya xarumaha caafimaadka si looga hortago in faafin bukaanku u gudbiyo shaqaalaha caafimaadka hawo ama dareere.
Waxqabadka sheyga iyo qaab dhismeedka:
Badeecadani badanaa waxay ka kooban tahay dusha sare, surwaalka, xarig caag ah iyo astaanta qoorta ee gadaasha. Waxaa badanaa laga sameeyaa dharka fiber-ka ee cufnaanta sare leh, kaas oo ka sameysan Hooded qaab dhismeedka hal-xabbo oo lagu xiray xarig caag ah.
1. Fadlan dooro oo xaqiiji qaabka ilaalinta kahor intaadan isticmaalin.
2. Dharka difaaca ee ku habboon cabbirkaaga waa in lagu xushaa si waafaqsan sawirkaaga.
3. Xidho dharka difaaca si aad u hubiso in waardiyaha albaabku xiran yahay oo xaaladdiisu wanaagsan tahay. Fadlan go'aan ka gaadho inaad xiraneyso iyo in kale
qalabka kale ee difaaca sida loogu baahan yahay. Haddii wajiga, curcurka gacanta / cagaha iyo furitaanka kale lagu duubay cajalad, saameynta ka hortagga ayaa ka sii fiicnaan doonta.
Taxaddarrada, digniinta iyo waxyaabaha soo jeedinta leh:
1. Fadlan si taxaddar leh u aqri buuga kahor intaadan isticmaalin.
2. Kahor isticmaalka, fadlan si adag u raac isticmaalka una isticmaal xayiraadaha dharka ilaalinta caafimaadka cufnaanta sare ee caagga ka samaysan dharka caagga ah ee polyetylen. Isticmaalayaashu waa inay xukumaan in sheygu ku habboon yahay munaasabado gaar ah kaligood. Haddii munaasabadaha isticmaalka ay ka badan yihiin isticmaalka iyo xaddidaadda alaabta, annagu wax dammaanad kama qaadno tan, mana qaadan doonno mas'uuliyad la xiriirta tan.
3. Fadlan iska ilaali qoraxda tooska ah.
4. Badeecadani waa lagu dhalaalay 135 ℃, fadlan ka fogee isha kuleylka iyo dabka furan marka aad isticmaaleyso.
5. Alaabtaan waa la tuuri karaa. Fadlan u maaree sida waafaqsan shuruudaha xeerarka ka hortagga noolaha ka dib isticmaalka.
6. Waa ka mamnuuc kuwa xasaasiyadda ku leh dharka polyetylen.
7. Badeecadani waa xirmo nadiif ah. Haddii xirmada waxyeello soo gaadhay, fadlan ha isticmaalin. Kahor intaadan xirin, fadlan ka fiiri dharka ilaaliyaha muuqaal ahaan. Haddii waxyeello, midab xumo, wasakh iyo xaalado kale jiraan, fadlan ha xidhin.
8. Badeecada looma isticmaali karo wixii ka dambeeya mudada ay shaqeyneyso.
Taariikhda dhaqan galka: kaliya loo isticmaalo inta lagu jiro xilliga xaaladaha degdegga ah ee faafa
Taariikhda soo-saarka / Dufcaddii No.: eeg calaamadda
Xaaladaha keydinta iyo gaadiidka: fadlan iska ilaali qoraxda tooska ah kuna keydi heerkulka qolka meel qabow oo qalalan.
Sharaxaadda calaamadaha, calaamadaha, astaamaha, soo gaabin, iwm
Magaca xirfadlaha / soo saaraha: Nanchang Jingzhao Medical Technology Co., Ltd.
Cinwaanka: No.318, Gong Ye 1LU (Koonfurta), Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang, JiangXi, China.
Hore: Dharka go'doominta la tuuro
Xiga: Dhar qalliin oo aan tolmo wanaagsan lahayn oo la tuuro